Ukhuthaza abesifazane bazinikele emsebenzini | Isolezwe
Ukhuthaza abesifazane bazinikele emsebenzini
Isolezwe / 12 July 2012, 11:19am /
UNKK Cwengekile Myeni wakwaNyuswa ongomunye wabazongena kowamanqamu emncintiswaneni we Shoprite Checkers Women of the Year Awards wakulo nyaka
UKUWINA akukhona okubalulekile kosefinyelele kabili kowamanqamu omncintiswano wokuklonyeliswa kwabesifazane abawusizo emphakathini, iShoprite Checkers Women of the year award.
UNkk Cwengekile Myeni (69) wakwaNyuswa, KwaZulu-Natal, uthe ufuna ukuqokwa kwakhe nakulo nyaka kube ngokuzokhuthaza abantu besifazane ukuthi baqhubeke nokuzinikela emsebenzini wabo.
Kulo nyaka uqokwe eqoqweni lezempilo kanti ngo-2010 wayeqokwe kwelezemfundo.
“Akungiphathi kabi ukuthi angihlomulanga ngalesiya sikhathi. Namanje akubalulekile ngokungako ukuhlomula. Ngijabulela ithuba lokukhuthaza abantu besifazane ukuze babone ukuthi akukho okungenzeki,” kusho uNkk Myeni.
Ungomunye wabangene kowamanqamu ohleni lwe-Health Care-Givers kulo mncintiswano.
Ukukhulela ebunzimeni kumenze wanozwelo lokusiza abantu, yingakho nje engumhlengikazi eHillcrest Aids Centre Trust.
Uthando lwakhe lokuthuthukisa abantu luvele kakhulu ngesikhathi eqala uhlelo lokweseka ogogo, i-Gogo Support Group esinogogo abangu-1 500 abavela ezindaweni ezehlukene abafundiswa amakhono ahlukahlukene ukuze basize imiphakathi abaphuma kuyo.
Uqale lolu hlelo ngo-2006 ngoba ebona kunesidingo esikhulu sokusiza ogogo njengoba bekuyibo abebenakekela abantu abaphethwe yingculazi futhi kuyibo abagcina bekhulisa izingane ezishiywe ngabazali ngenxa yalesi sifo.
Ogogo abakulolu hlelo bafundiswa amakhono ahlukahlukene, okukhona kuwo ukuthunga, ukukhulisa abantwana, ukuyala abashonelwe nezemidlalo.
UNkk Myeni usungule imidlalo yogogo ebizwa ngeGogolympics ebidlalwa ngoMashi kulo nyaka. Kule midlalo kwakukhona ogogo abangaphezu kuka-1 000 ababedlala ibhola lezinyawo neminye imidlalo. ngawo babehlose ukugqugquzela ogogo ukuthi baqhubeke nokunakekela impilo noma sebebadala.
“Le midlalo ayigcini ngokugqugquzela ogogo ukuthi bazinakekele kuphela kodwa ibanika nethuba lokuzithokozisa nabazukulu babo bazane kangcono. Kweminye imidlalo ogogo basuke besenkundleni yezemidlalo nabazukulu babo,” kusho uNkk Myeni.
Abaxhasi balo mncintiswano banxuse umphakathi ukuthi uvotele loyo abakholwa wukuthi ufanele ukuwina le ndondo yokuba ngowesifazane ovelele.
Amavoti abo azoba ngu-30% wemaki elizohlanganiswa nemibono yamajaji alo mncintiswano.
Abadle umhlanganiso bengabodwana kulo mncintiswano bazozitholela imali ibe ngeyabo kepha abayiqoqo bazonikwa imali engu-R100 000 ukuze baqhubeke nomsebenzi abawenzayo.
Umcimbi wokunikezela ngezindondo uzoba kwephezulu e-Emperors Palace, Egoli. Lo mcimbi uzovela kuthelevishini ngo-8 no 9 Agasti kuMzansi Magic, DSTV.